Evernote wuxuu kuu ogolaanayaa inaad adeegsato AirPods si aad uguqorto codka qoraalka cusbooneysiintiisii ​​ugu dambeysay | Wararka IPhone
Evernote wuxuu u oggolaanayaa isticmaalka AirPods inuu cod ugu beddelo qoraal cusbooneysiintiisii ​​ugu dambeysay
Ruben gallardo | | Barnaamijyada IPhone
Evernote waa mid ka mid ah adeegyada qoraallada ugu da'da weyn warshadaha. Adeeggan daruuriga ku saleysan ayaa nala joogay sannado badan hadda oo wuxuu isu taagay inuu yahay mid ka mid ah beddelka ugu weyn ee loogu talagalay isticmaaleyaasha barnaamij kasta. Cusboonaysiinta barnaamijyada kaladuwan iyo isku-darka adeegyada cusub ayaa joogto ah. Mid ka mid ah waxyaabihii ugu dambeeyayna waa Awoodda lagu tilmaami karo qoraallada Evernote iyada oo loo marayo samaacadaha taleefannada gacanta ee Apple, AirPods.
Qoraalka hadalka-qoraal-qoraalku ma ahan muuqaal ku cusub Evernote. Dabcan, waxa kaliya ee aan adeegsan karnay waxay ahaayeen makarafoonada lagu dhisay qalabkayaga, ha ahaadaan iPhone ama iPad. Hadda, iyada oo ay suurtagal tahay in la isticmaalo samaacadaha dhagaha sida AirPods ee qoraal qaadashada, Tani waxay keeni kartaa tiro wanaagsan oo isticmaaleyaal cusub ah oo doonaya codsi fududeynaya maalinba maalinta ka dambeysa.
Dhanka kale waa inaan ku cadahay qodobkaan. Waana taas in ragga ka socda Evernote ay faallo ka bixiyaan qoraalkaaga in Nooc kasta oo dhegeysiga Bluetooth ah oo leh makarafoon ku dhex jira ayaa la isticmaali karaa, taasoo ka dhigaysa mawjadaha cusub ee adeegsadayaasha xitaa fudud. Sidoo kale, xusuusnow in isdhexgalka Siri buuxa laga heli karo barnaamijka Evernote iOS muddo ah. Marka waxaan sidoo kale la xiriiri karnaa kaaliyaha macmiilka ee Apple waqti kasta oo loo maro AirPods ama wax la mid ah si ay ugu qori karto ballanta adeegga caanka ah.
Dhinaca kale, kooxda Evernote sidoo kale waxay kula talinayaan dadka isticmaala Premium y Business dib ayey u lahaan doonaan shaqadii «Context», midda soo jeedinaysa qoraallo kuxiran waxa aad qoreyso si aad ugu darto macluumaad dheeri ah qoraaladaada. Dhanka kale, marka lagu daro hagaajinta cayayaanka qaarkood, waxay sidoo kale kudareen nooca 8.12 taas labadaba maalinta iyo bisha ayaa had iyo jeer laga arki karaa dusha shaashadda qalabkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Evernote wuxuu u oggolaanayaa isticmaalka AirPods inuu cod ugu beddelo qoraal cusbooneysiintiisii ​​ugu dambeysay
Guriga Google iyo Google Home Mini ayaa imaan doona Spain bisha June